Shiinaha Runjin © Krunt ™ -N2000 Soosaarida Mashiinka Qaboojiyaha Soosaarka iyo Warshadda | Runchen
Isku qas slurry hawo iyo qabooji si ay u soo saaraan jalaato. Mashiinka wuxuu si isdaba joog ah u soo saari karaa kareemada barafka leh tayo isku mid ah. Waxa kale oo lagu dabaqi karaa baraf-dusha sare ee alaabada aan-jalaatada ahayn.
Frunt ™ -N2 mishiinka dhaxanta joogtada ah gebi ahaanba waafaqsan 3-A heerka caafimaadka ee
Ururka Cuntada & Caanaha Warshadaha Soo Saara, USA.
Mashiinka, saxanka waardiyaha iyo nidaamka dhuumaha qaboojinta ee mashiinka dhammaantood waxay ka sameysan yihiin bir bir ah. Dhammaan qeybaha la xiriira qalabka isku dhafka ah iyo jalaatada waxay ka sameysan yihiin walxaha birta ka sameysan oo si fudud loo nadiifiyo loona is weydaarsado.
Rakibaadda Mashiinka qaboojiyaha wuxuu si toos ah ugu xirnaan karaa korontada, mashiinka qaboojinta, hawada iyo qulqulka.
Tuubo qabow Tuubbada qaboojintu waxay ka samaysan tahay nikkel saafi ah, oo leh gidaar gudaha gudihiisa ah oo qallafsan iyo dusha sare oo siman, kaas oo bixiya is-weydaarsiga kuleylka oo aad u fiican iyo saameyn qabow oo wax ku ool ah oo loogu talagalay qalabka isku-darka jalaatada.
Qaboojinta nidaamka Si loo helo awood qabow oo xasilloon si loo hubiyo in kareemada barafka leh heerkul habboon ama joogto ah. Marka mashiinka la joojiyo ama nidaamka qaboojinta si lama filaan ah loo xiro (tusaale ahaan, xiritaanka xaaladaha degdegga ah), kala-baxa ammonia kulul ayaa loo isticmaalaa in looga hortago qabow. Dareeraha ammonia waa inuu ahaadaa mid aan lahayn xumbo cadaadiskuna waa inuusan ka hooseyn
in ka badan 4 bar (58 psi). Heerkulka uumiga ee mashiinka qaboojiyaha waa -34 ℃ (-29 ℉).
Wadid Nidaamka wadista waxaa si toos ah looga soo qaadaa matoorka weyn ee loo yaqaan 'blender' iyada oo loo sii marinayo suunka suunka.
Mashiinka galitaanka iyo ka bixida Waa koox ka mid ah bamka marsho. Waxay magdhabi kartaa dharka caadiga ah iyada oo loo marayo hagaajinta farqiga. Dusha sare ee bamka birta ah ee birta ah waxaa lagu daaweeyaa nidaam gaar ah si loo yareeyo xirashada iyo jeexitaanka.
Hakad Mashiinka hakin waxyar inta lagu guda jiro soosaarka si loo hubiyo luminta ugu yar ee qalabka jalaatada iyo xasiloonida tayada ee tayada.
2000 litir saacaddii (528 galaan oo Mareykanka ah)
Soo saarku wuxuu ku saleysan yahay xaaladaha soo socda:
Heerkulka gelitaanka ee slurry +5 ℃ (+41 ℉) Heerkulka waxsoosaarka ee jalaatada -5 ℃ (+23 ℉) Uumiga heerkulka -34 ℃ (-29 ℉)
Waxyaabaha saliida ah ee kujira ammonia <30 PPM heerka Ballaarinta 100%
Xaaladda ee slurry Guud ahaan jilicsanaanta jalaatada waxay ka kooban tahay 38% arrin adag. Soosaarka dhabta ah iyo soosaarida heerkulka waxay kuxirantahay qaaciidada jalaatada.
Heerka naqshad Ka sokow qaabka caadiga ah ee la soo sheegay, Frunt ™ -N2 sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha soo socda.
Tifaftira hawada Xakamee heerka ballaarinta iyo CIP bamka (haddii la bixiyo) hawo cadaadis leh. Xakamaynta guddiga Dhammaan shaqooyinka qalabka waxaa lagu sameeyaa guddigan, oo ay ku jiraan cabirka cabbirka ee mootada, manometerka hawada, mashiinka, batoonka ON / OFF ee mootada weyn, hagaajiye si loo xakameeyo qaboojinta iyo qulqulka bamka qulqulaya.
Bamgaree wadid Awoodda ku shubida iyo sii deynta mashiinka waxay ka timaadaa mashiinka maareynta maareynta qalabka isdabajooga. Baaxadda xakamaynta ee isbeddelka xawaaraha ee amarka iyo sii-deynta mashiinka ayaa loo dejin karaa 10-100%.
Awoodda isku qasid bamka 120-1200 litir slurry saacadiiba (32-317 US galaan).
Heerka dayactir Qaybo ka mid ah qalabka dayactirka iyo qalabka, giraangiraha suunka loo isticmaalo in lagu beddelo cadaadiska tuubbada qabow iyo giraangiraha suunka loo isticmaalo si loo yareeyo xawaaraha isku darka ayaa lagu daray.
Qalabyo Ikhtiyaari ah oo loo adeegsaday Frunt ™ -N2 Waxyaabaha lagu daro bamka
Si toos ah loogu shubo dareeraha udgoon ee dareeraha ah iyo waraaqaha yar yar ee arrimaha adag ka galiya tuubada qaboojinta saamiga.
Tee waalka piston Ku xidhan tuubada wax soo saarka ee jalaatada
Muujinta siidaynta cadaadis Ku xidhan tuubada wax soo saarka ee jalaatada Muujinta siidaynta heerkulka Ku xidhan tuubada wax soo saarka ee jalaatada Haasaawaha joogtada ah (la dhisay)
Baraf kareem kala U qaybi kareemada la soo saaray laba xarimood oo kala duwan oo buuxi jalaatada
Degdeg ah joogso waalka Nidaamka qaboojinta
Freon dalab Waa loo beddeli karaa inay ku habboon tahay mashiinka nooca Freon ah, kaasoo saameyn yar ku leh awoodda.
Gargaar waalka TüV Qalabka gargaarka waa in lagu rakibaa nidaamka qaboojinta caadiga ah si uu ula jaan qaado shuruudaha qaboojinta ee deegaanka.
Naas nuujinta dayactir qaybo Waxaa loo adeegsaday dayactirka 3000 ama 6000 saacadood
Mashiinka ugu weyn 22 kiilowatt
Mashiinka Mashiinka 1.5 kiilow
Heerka tamarta korantada 3-waji 380 V, 50 Hz Amonia dhuunta:
Dhuumaha dib u soo celinta hawada 76 mm3 inji
Tuubada galitaanka dareeraha dibedda 20 mm3 / 4 inji
Dhuumaha hawada kulul ee dibadda 20 mm3 / 4 inji
Dhuumaha dheecaanka dibedda 20 mm3 / 4 inji
Dhuumaha waalka ee gargaarka dibadda 25 mm1 inji
Biibiile ku amraya dibedda 38 mm
1.5 inji tuubada sii deynta ee dibadda 51mm2 inji
Tuubada hawo-qaadka hawada 12 mm 1/2 inji
Isticmaalka hawada 3.5 m3/ h 124 inji cubic / saacaddii
Hore: Runjin © Krunt ™ -N1200 Mashiinka Qaboojinta Jalaatada
Xiga: Runjin © Krunt ™ -EX800 Khadka Qalalaasaha iyo Kala-goynta Ice cream